Indlela enhle futhi ethokomele endlini lapho kukhona izitshalo. Ababona uyabukeka emehlweni futhi kuyakha kuphela, kodwa futhi wenze esiwuphefumulayo isala ihlanzeke kakhulu. Ukuze izimbali, okuyinto ekhaya, siye njalo uyaphila, ngabo kuyadingeka ukuze unakekele, ngoba njengoba edabukisayo njengoba ziqala ukufiphala.
Zokuhlala ezindlini eziningi kakade izitshalo ezifana imali esihlahleni futhi ficus. Ziyakwazi linesizotha zinakekelwe futhi babe, ngokusho kwabanye izinkolelo, inani elithile, oluletha inhlanhla endlini nenhlalakahle. Kodwa kaningi kakhulu Jade yethu alithandayo lishiya aqala ukuwela. Ngenxa yalokhu, leyo ndawo ilahlekelwa yobuhle balo nokuhlala uyofana induku njalo branched, nimkhiphela ebhodweni.
Kungani amacembe awohloka houseplants?
Ngakho iziphi izizathu lesi simanga? Endaweni yokuqala emaqabungeni imali isihlahla abawayo ngenxa ukuthambisa okungafanele. Jade akuyona uyakuthanda umswakama ngokweqile, kodwa futhi hhayi Kunconywa ukuba ashiye yome isikhathi eside. Ngesikhathi ehlobo sihlahla kufanele uyophuziswa kaningi. Daily noma Njalo ngemva kosuku olulodwa, kuye ngokuthi lapho inhlabathi usemanzi ngokwanele.
Kuyadingeka ukuba eduze ukuqapha bese ezimpandeni awazange wambozwa amanzi, futhi umswakama buthelela ezansi kwembiza. Esikhathini esiyiminyaka ekwindla ka isikhathi imali isihlahla ukuthambisa kanye kuphela ngesonto, bese ebusika ngisho lingandile.
Kungani amacembe awohloka sesitholakele esimileni ephelele?
Impendulo ilula - kungase kwenzeke ngenxa ukuthambisa ngokweqile noma, kunalokho, ngenxa yokuntuleka umswakama. Ngakho-ke, isimo kwenhlabathi kuyadingeka ukuze ubuke kakhulu ngokucophelela ukuze bagweme falling off noma yellowing kanye omiswe amahlamvu.
Ngaphezu kwalokho, Crassula akakubekezeleli elangeni, kodwa uthanda izibani okuhle. Kule ndaba akufanele bavunyelwe ukuthi wayekade usuku lonke elangeni, ngaphandle kwalokho amaqabunga overheat, kuyaqina kanye aqala ukuwela. Ukuze ugweme lokhu, ibhodwe ne isitshalo kungcono ebhokisini nokukhanya okwanele, kodwa ngesikhathi esifanayo kuzo imisebe yelanga. Uma kwenzeka ukuthi noma ngasiphi isizathu ukwenza kanjalo awukwazi ke ehlobo uvala iwindi iphephandaba noma iphepha.
Kungani amacembe awohloka ngisho noma isihlahla imali bazithela kahle?
Kodwa iqiniso lokuthi ukuyinisela amanzi aphuma empompini, okuyinto bengayi noma kunjalo engenakwenzeka. Imithombo enjalo yamanzi iyonikwa ume izinsuku ezimbalwa. Futhi zokuvimbela ezinhle yellowing kanye nokulahlekelwa amahlamvu kungenziwa olufuthwe ngamanzi kusukela isifutho kuphela kuleli cala kumele kube emazingeni okushisa okuvamile.
Esinye isitshalo ozithandayo ezimbizeni iyona ficus, okuyinto linesizotha kakhulu futhi kulula kakhulu ukuba anakekele. Kodwa, ngeshwa, ngezinye izikhathi amahlamvu ficus phuzi futhi ewa. Lokhu kungenzeka ngenxa yezizathu eziningana.
Pho kungani amacembe awohloka?
Ngokuyinhloko, lokhu Isizathu kungaba kungokwemvelo. Amahlamvu aqala ukuwela bese ephenduka abe phuzi kanye njalo ngemva kweminyaka embalwa. Kodwa kungase kube ngenxa ukunyakaza izitshalo kwenye indawo, njengoba izitshalo iraba ukuthi sebekubeke ungathandi. umswakama ngokweqile futhi kungaba yingozi kuye futhi kungabangela yellowing amahlamvu. Nakuba umhlaba ebhodweni ngeke ome ngokwanele, ngisho ezansi, it is hhayi Kunconywa ukuba amanzi. Ukuze ufunde lokhu, ungasebenzisa induku lokhuni. Direct elikhanyayo kwelanga ficus akanakuma, kodwa waya endaweni lapho kufanele okwanele. Akuvunyelwe, futhi khona egunjini okusalungiswa.
Amazinga othanda Ficus - degrees 18. Ngaphandle akunakwenzeka wambeka eduze amabhethri kanye nomoya conditioners. Mhlawumbe ukubukeka eziwuhlupho kwembiza, kunjalo kufanele uhlole ukutholakala kwabo.
Uma ulandela lezi zincomo, houseplants zakho kuthokozise kuwe ubuhle bayo iminyaka eminingi ezayo!
Lapho ukusika peonies ubusika? iseluleko professional
Gel Calgel sula: Izibuyekezo